ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ညောင်သီးကိုသာ စားရပါလိမ့်”
ကျေးဇူးတင်တယ်အကိုပေါ..အပေါ်က Post ရယ်
နဲ. နိုင်ငံရေးအကြောင်းတုန့် ပြန်တာမတူပါ...
Singapore အကြောင်းအပေါ်တုန်.ပြန်တာ ကပိုရမ်း
လားမသိ..ဘာဘဲပြောပြော ကိုShweaung တို.လို
အမည်မှန်link အမှန် တွေနဲ့ယူဆချက်တွေ ကိုပြောကြတာ..ပိုအားရလာမိတယ်ခင်ဗျာ...
Oh my god! Whatagreat post! I think you haveavery good reasonable thinking.
အခုတလော လူတွေ 2010 အကြောင်းသိပ်ပြောတာ ကြားနေရတယ်ဗျ။ 2010 သာ န-အ-ဖ စီစဉ်သလို အောင်မြင်သွားရင် သူတို့လမ်းဆုံးသွားပီ ဘာမှဆက်လုပ် စရာမလိုတော့ဘူးလို့ ပြောသံတွေ ဟိုနား ဒီနားကနေကြားနေရတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့တွေ ရဲ့အဖြေက အပြောင်းအလဲများလား? အပြောင်းအလဲ လောက်မှာပဲကျေနပ်ကြတော့မှာလား? အတိုက်အခံကအားသာသွားရင် အဖြေလား?? ကျွန်တော်တော့ အဲလိုမယူဆခြင်ဘူး။ နိုင်ငံသားတိုင်း ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးရဲ့ အနှစ်သာရကိုမရ မခြင်း န-အ-ဖ တက်တက် အတိုက်အခံတက်တက် အတူတူ ပဲ။
အပြောင်းအလဲဟာအဖြေဆိုရင်တော့ "ဟုတ်ကဲ့ ကိုပေါ။ ကျနော်ရေကို ဗိုက်ထဲမှာထည့်သယ်လာပါတယ်။ ကိုပေါ လိုချင်ရင်ခွက်ခံလိုက်ပဲ" ဆိုတဲ့ဗိုလ်ကြီးအဖြေမျိုးပဲ ပေးရ မှာပဲဗျာ။
>>>blue, zml.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
>>>Shweaung… ၂၀၁၀ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်ရေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ နောက်လာမယ့် ပို့စ်ထဲမှာ ဖြစ်ဖို့ များတယ်။ ကျနော်လည်း ကိုရွှေအောင်နဲ့ အမြင်တူပါတယ်။ အပြည့်အ၀မရမချင်း ဆုံးခန်းတိုင်အောင် ဆက်လုပ်သွားရမှာပါ။
သေချာတာတခုက ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ရပ်တည်မူ့ကပိုပြီးတော့မှေးမှိန်သွားမှာ အမှန်ပဲဗျ နိုင်ငံတကာက 2010 ဘယ်လောက်အသိမှတ်မပြုဘူးပဲပြောတရားမဝင် အာဏာရှင်အစိုးရကိုတောင် သူတို့နေရာပေးနေသေးတာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တတ်လာတဲ့အစိုးရကိုပိုပြီး နေရာပေးမှာအသေအချာပဲဗျ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် ခင်ဗျားတို့ကျနော့တို့မှာအဖြေမရှိသေးဘူးထင်တယ် ကိုပေါရေ ပြီးတော့ခင်ဗျားပြောသလို စည်းကမ်းရှိကြပါ အားလုံးတက်ညီလက်ညီပါဝင်ကြပါဆိုတာကလဲ ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဗျ နောင်နစ်ပေါင်းရာထောင်ချီကြာကြာ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ် ကိုပဲ စည်းကမ်းရှိရှိ အေးအေးဆေးဆေး တောင်းယူမယ် ဆိုရင်လဲသဘောပေါ့ဗျာ
To : Anon October 2, 2009 12:04 PM
Democracy cannot be asked or requested.
It has to be practised by each and everyone in the society.
It can bealong way to becomeafully democratic society. But important thing is that we cannot just sit and wait because nobody will bring democracy to Burma except the Burmese people. We all have to know we only are the participants in that process of changing democratic system in Burma and have to learn democratic values and exercise our rights along the way whenever it is possible.
Removing the Junta doesn't mean that we get democracy.But it will be true to say that we remove the big obsticles in our way to democratic Burma.
But without each and everyone's participation in exercising their own rights and nurturing the democratic principles and values, Burma will never becomeatrully democratic society.
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကလဲ တိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်ဘယ်လိုမှ မဲပေးနိုင်မဲ့ပွဲ မဟုတ်ဘူး ကုလားဖန်ထိုးပြီးလုပ်သွားမှာပဲ
သူ့စီစဉ်ပြီးသားပါတီတွေက ဝင်ခွင့်ရမယ် ကျန်ပါတီတွေက ရွေးကောက်ပွဲဝင်လဲ အရွေးမခံရဘူးဆိုပြီးလုပ်မယ် သူ့လူတွေကိုသာနိုင်ကြောင်းကြေငြာမယ် အမတ်ရူး နေတဲ့သူတွေ လွတ်တော်ထဲမှာရသလောက် ပြောမယ်ဆိုသူတွေ အတွက်ကတော့ ဆောရီးပဲ နေရာပေးမှာမဟုတ်ဘူး
အခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ဘယ်လိုလုပ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ပြီးသားကို ဘာလို့ ၂၀၁၀ ကိုမျှော်လင့်ယုံကြည်နေကြတာလဲ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ဟာလဲဒီတိုင်းပါပဲ အတိုက်အခံတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်၇ှိနေရာက ပျောက်ကောင်းပျောက်သွားနိုင်တယ် အင်အားဆုတ်ယုတ်စရာတော့မရှိဘူး အရေခြုံတွေ အိမ်လွမ်းနာကျသူတွေကလက်နက်ချ မှာပဲ ဆွမ်းဆန်ထဲရောတဲ့ကြွက်ချေးတွေ ပျောက်သွားတာကောင်းတယ် အပြင်မှာချေမှုန်းစရာမရှိရင် စစ်တပ်မှာသူ့ဟာသူအတွင်းမှာ ကွဲမှာပဲ အကျိုးစီးပွားလုကြရင်းနဲ့ အချင်းချင်းဆော်မှာပဲ
အမြင်ဝေဝါးသူတွေ သာ ၂၀၁၀ကိုစောင့်နေတာပါ